Ukuphelela kanye isikhumba wezempilo - ke DeSheli
Njengamanje, mayelana izimonyo deshele wezwa owesifazane lazy kuphela. Le brand Israeli abanomsindo yahlasela emakethe yezimonyo in kanye wadala furore, kusale kuze ngemuva mncintiswano. Inkampani «DeSheli» Kutfutfukisa silwenza imikhiqizo siphelile, egxile a izinwele ebusweni oluphelele futhi edidiyelwe kanye isikhumba (ngasiphi usebenza nje kuphela uhlobo isikhumba kanye nesimo yayo). Namuhla «DeSheli» - kuba inkampani ngokushesha futhi yayiqhubeka ikhula, ukukhiqizwa yayo izimonyo ezintsha ngempela futhi eliphezulu.
Credo lenkampani: «DeSheli - imfihlo wakho ngekusasa". imikhiqizo brand kabanzi yesimanje ubuhle salon, deshele-klientam.rf / centry-krasoty / amakhasimende desheli-salon-krasoty.html ngubani nethuba ukuze uzizwele indlela zonke charm beauty zokwelapha nokusetshenziswa kwezimali ezivela deshele futhi ukuqinisekisa impumelelo yabo. Imiphumela Nobungapheli, izinguquko ebonakalayo kwesakhiwo esikhumbeni, kodwa ngcono futhi intuthuko - yinto okuyiwona vouches brand.
Ukuthuthukiswa cosmeceuticals deshele - ke kuwumsebenzi omuhle kunayo yonke yakwa-cosmetologists we laboratories ngobukhulu eFrance Israyeli. Lena isiqinisekiso sokuthi okukhiphayo kusukela zokwazi ikilasi "okunethezeka" isimo amaklayenti omele nezidumile. Izimonyo kusukela «DeSheli» ngokuphelele ephephile ezempilo. Kuye licwebile nezifundo eziningi nazo zonke izinhlobo zezinsimbi kwezimvume. ukunakekelwa Umkhiqizi ngabantu owakhetha umkhiqizo wakhe etholwe ekusebenziseni ukwaneliseka esiphezulu kanye nezinzuzo (zikhona ngamazwe Geneva izitifiketi isampula izinga).
«DeSheli» is atiwa kakhulu ubuchwepheshe yayo lobunikazi, okuyinto izimfihlo uzifihle ngokucophelela futhi copyright ezibhekwa isikhathi yokusebenza. Yini kahle hle kule izimonyo? zinhlayiya "Smart", idayimane powder, sicashunwa lesitsetfwe namaminerali Olufile futhi amafutha yemvelo (yamagilebhisi imigodi, argan, I-alpine rose). Ongoti Kunconywa ukuthi cosmeceutics deshele ukugcina isikhumba isesimweni esihle, ukukulungisa unaphakade enkulu wobusha kanye freshness umbono deshele-klientam.rf / eksperty-rekomenduyut / zhanna-epple-i-ee-mnenie-o-kosmetiki-kompanii-desheli. html.
«DeSheli» ithuthukiswe eFrance, futhi ekhiqizwa e-Israel (Hlavin Industries isitshalo). Sekuyisikhathi eside Izwe umise ngokwaso njengoba enjalo, ukuthi ngokukhethekile supply global izimonyo eliphezulu. Imikhiqizo eklanyelwe ngokuyinhloko abalalaleli weqe uphawu esemncane lapho isikhumba kuba usengozini yokuthola izinguquko ezihlobene nokukhula. Deshele ukwazi sikuqaphe lokhu: ukuthuthukisa futhi uvuselele isikhumba, asuse puffiness phambi kwamehlo, ukuhlanza ezimbotsheni, yebo niphume ukubonakala. Sekukonke, ukuze emva kokushiya amakhasimende salon bangazizwa ngokoqobo ezimangalisayo ephakamisa umphumela.
«DeSheli» hhayi nje kwabesifazane kodwa nezalo amadoda. Isethi amacala deshele ezihlongozwayo nge izimonyo zihlanganisa indlela kungenzeka ukunikeza salon ukunakekelwa kwesikhumba futhi izinwele ekhaya.
Akvagrim nokukwenza "Monster High" ihlangano fun
Izibalo kwengqondo: ukubuyekezwa abazali nothisha
Indlela yokwenza siqu imaski yakho anti-ukuguga?
Uhlobo - kuba umlando wethu
Kuke kwenzeke yini kube sokukhulelwa evamile ngemva Ukubeletha?
Ukukhanya kwekhwalithi njengento ebangela ukwanda komsebenzi wabasebenzi
Indlela yokwenza laser ekhaya: ubuchwepheshe